ဤ အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ slot ကစက် ဖြစ်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 1024 အနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ. ဒါကြောင့်သင်ကတောတွင်း Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းတစ်ဦးခံစားပေးအာဖရိကလွင်ပြင်၌ Set. အဆိုပါသင်္ကေတများလုံးဝဆောင်ပုဒ်ချီးမွမ်း. အဆိုပါ slot ကအားလုံးအခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးတိုးပွားစေအကြောင်း. အဆိုပါဂီတသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောနှင့်ချောမွေ့ဂိမ်းအကြာမှာစပြီးစွဲသငျသညျစောင့်ရှောက်မည်.
Gypsy မွန်း slot နှစ်ခုရဲ့ developer များအကြောင်း
Lightning သေတ္တာဂိမ်းဒီအွန်လိုင်း၏ developer များဖြစ်ကြသည် အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ slot ကစက်. ထ Set 2004 ဒီကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှအရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းပို့ဆောင်ခဲ့.
ဒါကဖြစ်ပါသည်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 1024 slot ကအနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ. The minimum bet per spin is 40p and the maximum is £50. ဤ အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ slot ကစက် အာဖရိက၏အတောရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်. The purple skies and the yellow grass is fully complemented by the wildlife noises playing in the background. ဒီ slot ကသင့်မိုဘိုင်းတူမျိုးစုံပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, desktop နဲ့သင့်ရဲ့တက်ဘလက်.
အဆိုပါအနိုင်ပေးအရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ်လက်ဝဲမှလက်ျာဘက်အနည်းဆုံးသုံးသင်္ကေတများတန်းစီနေဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်. မတူညီသောအခြားသင်္ကေတများကိုထိုမြင်းကျားများမှာ, ပီ, meerkats, အာဖရိကစစ်သည်တော်, J ကို, မေး, K သည်,9 နှင့် 10. non-ရုပ်ပုံသင်္ကေတတစ်ခုအနိမ့်တန်ဖိုး.
ရိုင်းသင်္ကေတတစ်ခုနေဝင်ချိန်အတွက်အပင်တစ်ပင်၏ပုံဖြစ်ပါသည်. ရိုင်းသင်္ကေတကိုကြဲဖြန့် မှလွဲ. မည်သည့်သင်္ကေတအဘို့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါကြဲဖြန့်သင်္ကေတအခမဲ့လှည့်ခြင်းများကိုရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ်အခါတိုင်းသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောပြည်၌ feature အတွက် activate တဲ့ပန်းရောင်စိန်သည်. အခြားသင်္ကေတများကိုလည်းကာတွန်းကားနေကြတယ်. အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားအဆိုပါသုံးသငျသညျပေးနိုငျ 8 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.4စိန်ပွင့်ကိုသင်ပေးနိုင်ပါသည် 10 အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီး5စိန်ပွင့်ကိုသင်ပေးနိုင်ပါသည် 20 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောသစ်ပင်များကိုအရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ်ဆင်းသက်လျှင်ထိုအင်္ဂါရပ်ကတဆင့်နိုင်ကြောင်းတစ်ခုချင်းစီကိုရိုင်းထို့နောက်တိုးပွားစေပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မည်တဲ့ 2x သို့မဟုတ် 3x မြှောက်ကိန်းပေးမည်.
သငျသညျအခမဲ့လှည့်ခြင်းများစဉ်အတွင်းနောက်တဖန်နှစ်ဦးစိန်ဆင်းသက်လျှင်သင်တို့ကိုလည်းငါးအပိုလှည့်ခြင်းများရလိမ့်မည် feature. တဖန်သင်တို့ဆင်းသက်လျှင်3အခမဲ့လှည့်ဖျားနေစဉ်အတွင်းအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားဆုကြေးငွေပတ်ပတ်လည် re-ဖြစ်ပေါ်ရရှိ.
တောင်မှဒီဒီဇိုင်းသော်လည်း အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ slot ကစက် အရမ်းဖန်စီမက, ဂရပ်ဖစ်သန့်ရှင်းကြည်လင်ပြတ်သားစွာများမှာ. အဆိုပါဂိမ်းချောချောမွေ့မွေ့နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်. နှင့် 1024 ဘယ်သူမှဘာမှအနိုင်ရခြင်းမရှိဘဲပြန်သွားသည်အနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ. အားလုံးအခမဲ့လှည့်ဖျား features နဲ့တိုးပွားစေနှင့်အတူအပြည့်အဝဒီ slot ပါတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးထိုက်သည်.